Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Besca Industrial Co., Ltd.
Besca Cable saxaarad
BC3 saxaarad sallaan
BC4 saxaarad sallaan
Wire mesh Cable saxaarad
raaga oo Channel
U rakiban iyo Base
Rakiban Plate Flat
La shaqaynta BC3 / BC4 Cable saxaarad
Aluminum raaga oo, Cable Saxanka iyo sallaan
Nala Xiriir US
BC1 / 2/5/6 Cable saxaarad
BC3 Cable saxaarad (H = 50)
BC4 Cable saxaarad (H = 50)
BL1 / 2/3 Steel Cable sallaan
NEMA 12b / 16a / 20B / 20C Steel Cable sallaan
Marine Cable sallaan
20C NEMA / BL4 Cable Aluminum sallaan
Cover Cable sallaan
BL5 / 6 FRP Cable sallaan
BM1 / 2/3 Wire mesh Cable saxaarad
BM4 / 5/6 Wire mesh Cable saxaarad
La taaban karo Insert Channel
Kuleeliyaha & Markabka Cadaadis Steel
Daawaha Low Steel Xoog Sare
Carbon Fine Steel Qaabdhismeedka
Xoog High & Tenacity Steel
Hadal haynta Resistance Steel
Dhismaha maraakiibta Steel
Bridge Steel Qaabdhismeedka
Shanghai Besca Industrial Co., Ltd ixtiraamaya asturnaanta iyo ammaanka oo heshay online aad si dhab ah. Si ay kuu siiyaan wax soo saarka ugu wanaagsan, adeegga macaamiisha ku ool ah, iyo updates degdeg ah, waxaan u qoraan macluumaad kala duwan ka soo booqashadaada our site. Si aad u fiican ilaaliso arimahaaga gaarka ah, waxaan jeclaan lahaa in aan u sharaxno dhaqanka our macluumaad online iyo sida macluumaadka la ururiyo oo la isticmaalo.
Shanghai Besca Industrial Co., Ltd Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Waad ku mahadsan tahay helitaanka internetka ee (cinwaanka goobta: https://www.bescatray.com/ ). Waxaan xushmeynaa arimahaaga gaarka ah oo aad rabto si ay u ilaaliyaan macluumaadkaaga shakhsiyeed. Si aad wax badan ka bartaan, fadlan akhri Ogaysiiska Qarsoodiga our
Ogaysiiska Qarsoodiga Tani waxay fasireysaa sida aynu u ururiyaan, isticmaali, iyo (xaaladaha qaarkood) siino macluumaadkaaga shakhsiyeed. Ogaysiiska Qarsoodiga Tani waxay sidoo kale sharaxayaa tallaabooyinka aannu qaaday si uu u helo macluumaadkaaga shakhsiyeed. Ugu dambeyntii, Ogaysiiska Qarsoodiga, sharxayaa fursadaha aad ku saabsan ururinta, isticmaalka, iyo siidaynta macluumaadkaaga shakhsiyeed. By booqanaya Site, aad aqbasho dhaqanka ee ku xusan ogeysiiskan.
Ogaysiiska Qarsoodiga Tani waxay khusaysaa oo kaliya in ay Site this. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Tani ma aha codsan in our offline collection of macluumaadkaaga shakhsiyeed. Fadlan hoos ka fiiri faahfaahinta. Waxaan mas'uul ka ah dhaqanka content ama asturnaanta on ahayn wax aan ahayn https://www.bescatray.com/ website kaas oo Site this ku xidha ama links to our site.
1. Ururinta Macluumaadka. Waxaan ururinaa macluumaad kugu ka badan oo siyaabo kala duwan on Site this. Mid ka mid ah gool ururinta macluumaadka shakhsiga ah ee aad ka waa in la siiyo waayo-aragnimo wax ku ool ah, macno leh, iyo habka. Tusaale ahaan, waxaan u isticmaali kartaa macluumaadkaaga shakhsiyeed:
Ka caawinta Site this sahlan si aad u isticmaasho oo aan haysan si ay macluumaad mar kale galaan.
Caawiyo in aad si deg deg ah ka heli kartaa macluumaad, soo saarka, iyo adeegyada.
Naga caawi abuuraan content on Site this waa in ugu habboon in aad.
Kugu baraarujiyaan macluumaad cusub, wax soo saarka, iyo adeegyada aan bixino.
Sida caadiga ah, aad uma baahna in ay siiso macluumaadka shakhsiga ah in ay soo booqdaan website this. Si kastaba ha ahaatee, si loo horumariyo tayada adeegga, shirkadda laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay u siiyaan macluumaad shakhsi ah si ay awood Company inay si wanaagsan u fahmaan baahiyahaaga si ay kuu adeegaynaa, waqti isku mid ah, shirkadda xaq u leeyahay in ay qaadaan tallaabooyin si loo xaqiijiyo macluumaadka shakhsiyeed aad siiyaan siidaayay. Haddii aad bixiso macluumaad shakhsi ah oo ku saabsan dadka kale, ka dibna aad ka dhigay ansixinta rasmi ah ee dadka kale. Ballamo shirkadda, haddii aan waayo rabitaanka adiga kuu gaar ah, shirkada aan la wadaagi doonaa macluumaadkaaga shakhsiyeed ee Shirkadda iyo kooxaha kale ee xisbiga kasta oo saddexaad.
2. Macluumaadka Isticmaalka iyo Bixinta.
(a) Isticmaalka Gudaha. Waxaan u isticmaali macluumaadkaaga shakhsiyeed si loo farsameeyo amarkaaga iyo kuu siiyaan adeegga macaamiisha. Waxaa laga yaabaa inaan gudaha u isticmaalaan macluumaadka shakhsiyeed si loo hagaajiyo content our Site iyo qaabka, si loo hagaajiyo our outreach iyo dadaalka marketing our u gaar ah (oo ay ku jiraan suuq adeegyada iyo waxyaabaha aannu idiin nimid), iyo si loo ogaado macluumaad suuqa guud oo ku saabsan martida si Site this.
(b) Communications Waxaad la: Waxaan u isticmaali doonaa macluumaadkaaga shakhsiyeed inuu kula soo xiriiro oo ku saabsan goobta, iyo amarrada iyo dhalmo aad. Sidoo kale, waxaa laga yaabaa in aan kuu soo dirno email xaqiijin ah marka aad iska diiwaan nala.
(c) Isticmaalka Dibadda. Waxaan rabnaa in aan ku siino adeeg aad u fiican iyo in aad ka bixin doorashada weyn - waxaan ugu horrayn iibiso baayacmushtarkaagii, ma warbixin. Annagu ma iibiso, kirada, ganacsiga, liisanka, ama haddii kale u bandhigno macluumaadkaaga shakhsiyeed gaar ah ama macluumaad maaliyadeed oo qof.
Site Tani lagu daro nidaamka jirka, elektaroonik ah, iyo maamulka si loo ilaaliyo sirta macluumaadka shakhsiyeed, oo ay ku jiraan saldhig Secure lakabka ( "SSL") ee dhammaan macaamil maaliyeed marayo Site this. Waxaan u isticmaali encryption SSL si ay u ilaaliyaan macluumaadkaaga shakhsiyeed online, iyo waxaan sidoo kale u qaadan tallaabooyin dhowr ah si ay u ilaaliyaan macluumaadkaaga shakhsiyeed ee goobaha our. Helitaanka macluumaadkaaga shakhsiyeed la xadiday. Shaqaalaha oo kaliya kuwa u baahan in ay helaan macluumaadkaaga shakhsiyeed si ay u qabtaan shaqo gaar ah lagu siiyo in ay helaan macluumaadkaaga shakhsiyeed. Ugu dambayntii, waxaan ku tiirsan yihiin bixiyeyaasha adeegga-saddexaad ammaanka jirka ah ee qaar ka mid ah hardware computer our. Waxaan aaminsan nahay in nidaamka ammaanka waa ku filan. Tusaale ahaan, marka aad soo booqo Site, waxa aad heli server in lagu hayaa jawi ammaan jirka, ka danbeeya qafas qufulan iyo brannmur elektaroonik ah.
Inkasta oo aan u isticmaalno tallaabooyin taxaddar ah warshadaha-caadiga ah si loo ilaaliyo macluumaadkaaga shakhsiyeed, ma damaanad qaadi karno ammaanka dhamaystiran. 100% dhamaystiran ammaanka uusan hadda ka jira meel kasta online ama offline.